Gịnị bụ ịhụnanya na -akụda mmụọ | Bezzia
Maria José Roldan | 07/10/2021 22:56 | Mmekọrịta
Ịhụnanya na -akụda mmụọ bụ ụdị nzuzu nke otu n'ime ndị nọ na njikọ ahụ na -arịa ọrịa uche dịka nkụda mmụọ. Na nlele mbu, ọ nwere ike ịdị ka enweghị isi mana ọ bụ ụdị ịhụnanya nwere njirimara nke ya. Ọ bụ eziokwu na n'ọtụtụ ikpe, ka di na nwunye nwee ịhụnanya, a ga -enwerịrị nguzo mmetụta uche n'etiti mmadụ abụọ ahụ.
Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ịhụnanya nkụda mmụọ ahụ e kwuru n'elu nwere ike ime, n'agbanyeghị nnukwu nsogbu mmetụta uche nke dị na mmekọrịta dị otu a.
1 Ịda mbà n'obi na ịhụnanya
2 Gịnị bụ ịhụnanya na -akụda mmụọ?
3 Mkpa ịhụnanya maka mmekọrịta ịda mba
Ịda mbà n'obi na ịhụnanya
Na nlele mbụ ọ nwere ike isi ike ikwenye na onye dara mbà n'obi hụrụ n'anya ma nwee onye mmekọ. N'ọtụtụ ikpe, ịda mba bụ mmetụta na -egosi owu ọmụma na enweghị ịhụnanya, ma ọ bụ na mmadụ, ezinụlọ ma ọ bụ gburugburu ọrụ. Agbanyeghị, ịhụnanya a na -ahụ n'ime onye ọzọ nwere ike ime ka akụkụ ahụ dara mbà nwee mmetụta nke ọma wee chọọ ịpụ na olulu miri emi nke bụ ịda mba. Ị nwere ike ịsị na onye dara mbà n'obi chọrọ ịhụnanya nke onye ọzọ iji nwee mmetụta nke ọma ma hụ ndụ site n'echiche ka mma.
Mmekọrịta na -akụda mmụọ na -eme mgbe onye nwere nsogbu mmetụta uche dị otú a, chọta onye ga -enyere gị aka ịnagide ịda mbà n'obi dị otu a. Nnukwu nsogbu nke ụdị mmekọrịta a bụ n'ihi na di na nwunye ga -abụrịrị ihe abụọ na nguzozi dị mkpa anaghị abịa rụpụta.
Onye dara mbà n'obi chọrọ ịhụnanya nke onye ọlụlụ ya ka ọ nwee mmetụta dị mma, mana onye nke ọzọ anaghị enweta ihe ọ chọrọ ka ọ nwee oke. Ka oge na -aga, ọ bụ ihe dị mma na akụkụ na -enye mana ọ naghị enweta ihe ọ bụla, ị na -agwụ ike ma ghara inye onye nwere nkụda mmụọ ihe ọ bụla. Ya mere, mmekọrịta a na -eji nwayọ nwayọ na -akwụsị wee mebie oge.
Mkpa ịhụnanya maka mmekọrịta ịda mba
Ịhụnanya na -akụda mmụọ na -ada ada n'ihi enweghị ịhụnanya n'ime mmekọrịta n'onwe ya. Na mbido ma ọ bụ na obere oge, di na nwunye nwere ike rụọ ọrụ na -enweghị nsogbu ọ bụla, mana ka oge na -aga, mgbawa na -amalite ịpụtawanye nke ọma na mmekọrịta ahụ na -ejedebe.
Dịka anyị kwurula n'elu, mmekọrịta ahụ ga -abụrịrị nha anya n'ihe niile na ọnụnọ ịda mba n'ime otu mmadụ na -eme ka ụdịrị ihe ahụ ghara ime. Mkpa maka ịhụnanya maka otu ndị ọzọ na -enyeghị ihe ọ bụla na nkwụghachi, na -eme ka di na nwunye ahụ enweghị ọdịnihu ọkachasị na ọkara na ogologo oge.
Na nkenke, mmekọrịta ịda mba n'obi anaghị arụkarị ọrụ n'ọtụtụ ikpe ma ọ ga -adarịrị ọdịda. Onye dara mbà n'obi na -ewere ịhụnanya onye nke ọzọ dị ka ezigbo ọgwụ ọjọọ nke ọ kwesịrị ịdị na -ebiAgbanyeghị, ọ naghị enye di na nwunye ahụ ihe ọ bụla. Yabụ, mmekọrịta ịda mba anaghị arụ ọrụ ogologo oge wee mebie emebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Gịnị bụ ịhụnanya na -akụda mmụọ?
Aghụghọ iji mee ebili mmiri na ntutu na iron